Fitoriana eny Amin’ny Toerana Be Olona Tamin’ny Lalao Olympika Tany Arzantina
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Holandey Hongroà Iban Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Tagalog Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Poloney Tiorka Tseky Vietnamianina Yorobà
Rahalahy manisy boky ao amin’ny sasany amin’ireo kalesy fampirantiana efa ho 400.
6 NOVAMBRA 2018
Fitoriana eny Amin’ny Toerana Be Olona Nandritra ny Lalao Olympika 2018 Tany Arzantina
Natao tany Buenos Aires, any Arzantina, ny Lalao Olympika 2018 ho an’ny tanora. Nanao ezaka manokana mba hitoriana eny amin’ny toerana be olona àry ny rahalahy sy anabavintsika tany, tamin’ny 6 ka hatramin’ny 18 Oktobra 2018.
Atleta avy any Saint-Christophe sy Niévès mijery eo amin’ny kalesy fampirantiana. Boky an-jatony no voazara isan’andro nandritra ilay ezaka manokana.
Ny Lalao Olympika ho an’ny tanora no fifaninanana ara-panatanjahan-tena lehibe indrindra eran-tany ho an’ny atleta eo anelanelan’ny 15 ka hatramin’ny 18 taona. Atleta maherin’ny 4 000 avy any amin’ny tany 206 no nandray anjara tamin’izy io tamin’ity taona ity. Vavolombelon’i Jehovah maherin’ny 6 400 no nandray anjara tamin’ilay ezaka manokana, mba ho afaka handre ny hafatra avy ao amin’ny Baiboly ny atleta sy vahiny be dia be avy any amin’ny tany samihafa tonga tao amin’ilay tanàna. Nampiasa kalesy fampirantiana 390 teny amin’ny toerana efa ho 100 ireo rahalahintsika, tamin’izany.
Ny boky Manontany ny Tanora—Torohevitra Mahasoa sy ilay bokikely hoe Fanontaniana 10 Mahaliana ny Tanora no nasehon’ireo rahalahy teo amin’ilay fampirantiana, satria natao ho an’ny tanora ilay lalao. Nisy tamin’ny fiteny isan-karazany ireo boky ireo, anisan’izany ny alemà, anglisy, arabo, espaniola, frantsay, koreanina, rosianina, sinoa, ary tenin’ny tanan’ny avy any Arzantina. Boky 790 teo ho eo no voazara isan’andro nandritra an’io ezaka manokana io.
Faly erỳ ireo rahalahy sy anabavy izay nandray anjara tamin’ilay ezaka manokana, nizara ny fampanantenan’ny Baiboly tamin’ny tanora sy ny olon-dehibe.—Salamo 110:3.
Fampaherezana Nandritra ny Tour de France